Nwere ike mepee Mail a ... | Martech Zone
Taa nzipu ozi m natara envelopu acha anụnụ anụnụ nke edere aha m na adreesị nke ọma n'ihu. Adreesị azịza bụ PO Box mana ọ pụtara ka aka aka. Mgbe m tụgharịrị envelopu ahụ, o nwere akara akara Hallmark na ya. Ọchịchọ ịmata ihe kacha mma nke m wee mepee ya iji chọta kaadi nwere ozi na-esonụ:
Nke a bụ teknụzụ aka ederede na ọ ga-adaba na ya kpọmkwem mail ahụ ikpeazụ di na nwunye na afọ. Ndị na-ere ahịa maara na ọ bụrụ na ha emee ka ị mepee otu mpempe akwụkwọ ozi, ị ga-enwe ike ịgụ ibe ahụ. Ọ bụrụ na ị gụọ mpempe akwụkwọ ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịkpọkwu. Ọ bụrụ na ị kpọọ, ị ga-azụta. Ihe niile malitere na imeghe, ọ bụ ezie!
Ihe kpatara edemede a ji kwenye nke oma bu otua ha si hakarita otu mkpuru akwukwo (lelee 'e's in speed), na uzo leta (ma kerning na tracking). Usoro a na - adọrọ uche gị, enwere ihe dị iche na ụdị nkịtị iji duhie gị iche na ọ bụ aka aka ya.
Otu ụzọ dị mfe iji gwa ya na ọ bụghị bụ na ahịrị ndị edoghi edochara onwe ha na ibe ha ma kwụ ọtọ. Obi abụọ adịghị ya na a ga-agbanwe ụzọ aghụghọ ndị a n'ọdịnihu. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ ọrụ mara mma mara mma ma ejiri m n'aka na ọ ga-atụgharị atụmanya ole na ole. Enweghị m mmasị ebe ọ bụ na enwere m ike ịkwaga n'oge na-adịghị anya.
Tags: nlebara anyadiscuzzfacebook onugravatarimebe peejinnwale dị iche ichenhazi asụsụpdfnjikwa pdfTom Foremski
Mee 15, 2008 na 10: 09 PM
Naanị chere ruo mgbe ndị ahịa ga-amata ihe a wee bido ileghara ya anya. Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ maka ụlọ ọrụ iji nyefee ndị edemede akwụkwọ ozi na India. A ga-eji aka gị dee akwụkwọ ozi gị kpọmkwem. Ihe zuru ezu. Naanị chere.
Mee 16, 2008 na 6: 17 AM
N'ụzọ na-akpali mmasị, enwetara m ihe ọ bụla 'ejiri aka dee' ihe ole na ole site na snail-mail ka amụma gị wee bụrụ eziokwu.
Banyere ịpụ n'èzí na India - na akụ na ụba na-adawanye na dollar America dara ada, India na-adịwanye ọnụ karịa ịpụpụ na mpụga - ọkachasị ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị India gụrụ akwụkwọ nke ọma (ọtụtụ oge na United States). India emeela nke ọma maka onwe ya! Amaghị m na ha ga-abụ atụmanya ziri ezi maka ịchụpụ ahịa a, mana anaghị m enwe obi abụọ na mba ndị ọzọ na-enweghị ego nwere ike ịbịa ụdị nri ahụ na tebụl.
Mee 16, 2008 na 6: 49 AM
Chọpụta, M na-eche ọnwa atọ maka U-amaokwu òkù na ị ga-enweta ya n’iru m na achọghị ya. Ebee ka mma na nke ahụ?!? LOL.
Mee 16, 2008 na 7: 17 AM
Otu n'ime ndị enyi m na-arụ ọrụ na U-amaokwu ma ọ sịrị na ọ bụ ụlọ a kapịrị ọnụ na-ezubere iche n'ihi bandwidth na ebe dị anya site na ngwa ngwa ọrụ. Ọ gwara m n'ụzọ nkịtị onye agbata obi gị ọzọ nwere ike ịnwe ya mana ị nwere ike ọ gaghị. Echere m na ha na-arụ ọrụ site na nsogbu akụrụngwa na agbata obi na mpaghara. Enwere m ike n'ihi na m bi n'ụlọ ugbu a - nnukwu njupụta!
Mee 16, 2008 na 7: 51 AM
Yabụ, kedu ka anyị ga-esi nweta font ahụ? M nwere ike ugbua na-eche nke otu imewe Ọ ga-amasị m iji ya…
(Yep, mmeghachi omume nke ihe ngosi eserese.)
Mee 16, 2008 na 10: 39 AM
Ọ bụrụ na m bụ nwoke na-agba nzọ, m ga-enwe $ 10 na Philippines dị ka ebe a na-apụ apụ.
Ihe mmepe na-esote ga-abụ maka ngwaọrụ nyocha nke enwere ike iji wee chọpụta envelopu a na-emeghe, ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwanyị meghere ya, afọ nke mmadụ na ogologo oge tupu ewepụ ya na ahịhịa.
Mee 16, 2008 na 10: 55 AM
Ọ bụ ezie na ị na-ahụ ya dị ka ahịa ahịa na-akpali akpali, ana m ahụ ya dị ka pox. Usoro iji duhie ndị mmadụ ị payinga ntị abụghị ụdị usoro m nwere mmasị n'ọrụ. O doro anya na ha nwere ike ịdị mkpụmkpụ oge, mana achọrọ m ka ndị mmadụ attentionaa ntị na njirimara nke ika m yana ihe m na-enye, ọ bụghị n'ihi na ụfọdụ ndị iberibe bịara nwee echiche na m zigara ha akwụkwọ ederede aka. JWTCW.
Mee 16, 2008 na 12: 05 PM
Amaghị m ebe m kwuru na ọ bụ omume ahịa na-atọ ụtọ ma ọ bụ na akwadoghị m ya. Anaghị m ekwenye na gị, naanị ihe m na-ekwu bụ maka teknụzụ - ọ masịrị ya. Ka emechara, Abụ m onye iberibe nke meriri.